Global Voices teny Malagasy · 8 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 08 Novambra 2018
Manao fandraketam-peo azon'ny rehetra henoina
Mediam-bahoaka 08 Novambra 2018
Miarahaba anareo rehetra ... Vao avy namoaka ny rakipeo notontosaiko voalohany aho . Ny lohahevitr'ity rakipeo maharitra dimy minitra ity dia ny fitomboan'ny fanatontosana rakipeo sy ny olana atrehin'ireo olona manana olana amin'ny fihainoana.
Tsy afaka nihaona tamin'i Karen Hughes ilay bilaogera Saodiana nasaina nanatrika ny fivoriany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Novambra 2018
Adihevitra marobe no nanodidina ny iraka nataon'ny ambasadera Karen Hughes, tale lefitry ny diplaomasiam-bahoaka sy ny raharaham-bahoaka ao amin'ny Departemanta Amerikana any Afovoany Atsinanana. Nilaza ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao Arabo fa tsy misy ilaina ny fitsidihana.
Azia Atsinanana 08 Novambra 2018
Azia Atsimo 08 Novambra 2018
Tamin'ity herinandro ity, nametraka fanontaniana tamin'ireo mpamaky azy Saodiana i Abu Hamad : "Inona no hataonao raha nanapa-kevitra ny hanafika an'i Saodita i Bush sy ny "fitondrany miaramila"?" Mihevitra izy fa amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny dia tsy dia azo inoana loatra izany, ....
Bangladesh: Miasa ao amin'ny Helodrano
Fandinihana momba ny mpifindra-monina handeha hiasa any Golfa,